CNaPS BOENY: atrik’asa fitsinjovana ireo ECD | Région Boeny
CNaPS BOENY: atrik’asa fitsinjovana ireo ECD
23 septembre 2016 A La Une, Actualité
Notanterahina ny alarobia 07 septambra 2016 teny amin’ny Hotel les Roches Rouges eny amin’ny La Corniche Mahajanga ny fanokafana ofisialy ny fampiofanana ireo tompon’andraikitr’ireo Orin’asa ara-panjakana, nataon’ireo CNaPS(Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) eto Mahajanga.
Natao izao fampiofanana izao mba ahafahana mamaha ny olana misy amin’ireo mampiasa « contractuel »na ECD(Employé à Courte Durée) izay tsy mahazo ny zony nohon’ny antony maro. Izany zo zany dia mikasika ny fanampiana fianakaviana, fanampiana iatrehana ny loza sy ny aretina vokatry ny asa ary indrindra ny fisotron-dronono.
Maro ny olana mahatonga ny tsy fahazoan’izy ireo izany fanampiana ara-tsosialy izany, olana ara-bolan’ny mpampiasa, olana avy amin’ny CNaPS ihany koa, mety avy amin’ny Orin’asam-panjakana.
Nisy araka izany ny fikaonan-doha niarahan’ireo orin’asa miankina sy tsy miankina miaraka amin’ny CNaPS nandritran’ny fampiofanana izay haharitra roa andro izany.
« Mampirisika ny tompon’andraikitra maro samihafa mba hijery akaiky ny hoavin’ireo mpiara-belona amin-tsika ECD mba ahafahan’izy ireo mahazo ny zony », hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, tamin’ireo tonga nanotrona.